Ku saabsan | Blog-ka Fetish-ka ah
Hello iyo soo dhawee shabakadeena soodhaweyn ee aadka u xun! Maaha meel kaliya oo aad dhagaxyadaada ka heli kartid ama aad waqti ku qaadato oo aan marnaba soo laaban, maya - waa meel ay dadku ku qancaan jahawareeradooda. Meesha ay dadku u arkaan dadka sida maskaxda ku haya, meel ay kuugu badan yihiin, kuwa ugu qoto dheer ee aadka u jilicsanaa waxay noqdaan kuwo run ah.
Qashinka noocan oo kale ah ayaa sii socota si ay u koraan oo ay u kobcaan, maalin kasta oo aan ku soo rogno wax cusub, xiiso leh oo qoto dheer oo qallafsan. Ma heli doontid wax laga yaabo in loo tixgeliyo curyaan, rinjiyeyn ama gaas kale oo gaas ah. Anagu ma haysan doonno hab kale. Waxaan dooneynaa inaad kuhesho runta aad jeceshahay, waxaan dhab ahaantii ixtiraameynaa, sababtoo ah waxaan nahay sidan oo kale. Waxaan rajeyneynaa, niyadjabkayaga waxkasta oo dhan erotica khatar ah ayaa ka dhigaya waayo-aragnimada porno-daawashada aad u fiican. Hadda waa wakhti fiican oo laga wada hadlo dhamaan qaybaha boggaaga cusub ee aad jeceshahay.
Marka hore, waxaan leenahay fiidiyooga sawir leh. Ma ahan koobkii shaaha ee qofkasta, laakiin lambarradayadu waxay muujinayaan in ay ka mid tahay kuwa ugu caansan (haddii aysan aheyn kuwa ugu caansan) shabakadeena. Markaa waxaan leenahay Enemas maaddaama enema ciyaaraha iyo dhamaan noocyada kale ee maskaxda ku xiran ee ciyaaraha galmada ee qallafsan. Dhaqdhaqaaqa la soo dhaafay, waxaan sidoo kale marti galinaa fiidiyowyo iyo gabayo la xidhiidha Fududeynta / Baqshiishada iyo Caanaha waaweyn / Mashiinka Dhalmada. Taasi waxay u tahay dadka ku raaxaysta daawashada gabadh hal geel ah oo dhuuban oo dhuuban ayaa la soo taagay, oo ku dhawaad ​​nusqo gooyay. Marka, gaaban, haddii aad rabto inaad ku hesho vertigo adoo fiiriya godka daloolka, laba qaybood ayaa adiga kuu ah.
BDSM, dabcan. Ma jiraan wax la mid ah caqliga iyo caqliga macquulka ah. Waxaanu leenahay qaybta guud ee BDSM oo leh cirbadaha, silsiladaha iyo walxaha kale ee raaxeysanaya Rihanna iyada oo u dhiganta. Markaa waxaannu leenahay qaybta Dumarka ee Dumarka ah si ay u qanciso dhammaan cilladaha femdomka la xidhiidha, u diyaari inaad aragto wajiga cibaadada, cagaha cagaha, qashin iyo wax ka badan. Qaybta Lahjaduka ama qaybta Lezdom waxay ka buuxsantaa fiidiyowyo qurxoon oo leh laba gabdhood (ama ka badan) gabdho ah oo indho qulqulaya ciyaaraha qallafsan ee BDSM. Labada nin ee ragga iyo dumarku waxay ku saabsan yihiin dumarka jecel in ay adagtahay, ku dhawaad ​​xoogaa aad u adag oo ay yihiin kuwo raba inay rabaan qalbi la'aan, naxariis badan oo aad u daran.
Haddii aad raadinayso wax aad u daran, waxaan kugu soo aragnay wax daboolaya. Sidee ku saabsan waxoogaa cajalado mataan oo wanaagsan? Gabdhaha / guysku ma lumiyaan xakamaynta iyo xakameynta kamarad, matagida midba midka kale ama xitaa xitaa la daboolay inta lagu jiro kalfadhigooda jacaylka samaynta? Miyuu qurux badiyaa? Waxaan sidoo kale heysanaa qayb ka mid ah qodobbada loogu talagalay Rape Fantasy iyo, si aan fiicnayn, nambarkayagu waxay muujinayaan in nuucaas gaar ah ay u roon tahay haweenaydayada dumarka ah. Haddii aad rabto websaydh aan dhammaad lahayn oo cajalado fiidiyow ah, waxaan sidoo kale heysanaa taas. Qaybaha kale waxaa ka mid ah Bondage and Fetish, PVC iyo Latex iyo Fetish Miscellaneous.
Marka aad rabto in dumarkaaga ay kugu yaabiyaan, waxaanu leenahay qaybta oo dhan oo loogu talagalay haweenka. Kaliya t-da ugu da'da yar ee leh meydka ugu quruxda badan iyo dhedhexaadka. Waad jeclaan doontaa. Waxaa sidoo kale jira qayb loogu tala galay dumarka timaha leh. Maaha oo kaliya xanjo timir ah, midkood - caruurtanu waxay haystaan ​​koofiyadaha ugu xanaaqsan ee aad weligaa aragto, xitaa xitaa kama hadleynin hiririintooda, xayawaannada sirta ah.
Wixii wax tarjumo leh, waxaan leenahay qayb loogu talagalay Foot Fetish. Taasina waa midka ugu wayn ee fetish ah ee ka fekeraya, sidaa daraadeed waa wax yar oo uurjiif ah, waxaanu nafteena ku noqon karnaa qaybta Tits Fetish ee heerkaas. Qeybta Farshaxu wuxuu kuu ogolaanayaa inaad daawato fiidiyowyada ku jira, maxaa kale, gabdhaha iyo gabdhaha. Fiidiyowga sawir qaadku waxay u heellan yihiin orgasmka dumarka ah ee waligood ku qasban Fiidiyowga ku dhufanayaa ayaa afkaaga ku dhejin doona biyo, waxaad gebi ahaanba ku dhajin doontaa dhammaan kabadhadaas. Waxaa sidoo kale jira qeybo cayiman oo ah Dareemo Caafimaad Dhibaato, Bamgareynta, Dhalinyarada (18 +) iyo geeska Asshole oo hadda ah. Weli waxaan u furan nahay talo-bixinno, midkee ka wanaagsan - Asshole Corner, Asylole Asylum ama Asshole Alley? Isku-beddeliddu waa rafcaan, qirasho.
Xagayaga daloolka ah, si ay u hadlaan, waa qaybta ugu sarreysa. Waa arrin xad dhaaf ah xitaa ma lahan magac sax ah. Magacaabista waxa wax aan macquul ahayn, sababtoo ah ma jirto wax lagu tilmaami karo nambarada caadiga ah ee ku jira mawduuca. Waa dhammaan duurjoogta, qaar ka mid ah kuwa ugu ducada badan, loola jeedo, leexashada rabshadaha ah ee aad weligaa aragto. Qaar ka mid ah waxyaabahaas waa mid gaar ah, waxay ka timid ururo gaar ah, qaar ka mid ah waxaa soo gudbiyay dadkeenii qadarinayey (weli cabsi badan), qaar ka mid ahna waxaan ku helnay hooyada adag ee adag. Ha ka baqin inaad furto, ma aha qaar ka mid ah sanduuqa Lemarchand. Waan ognahay inaad rabto.
Si aad sheekadan dheer u gaabiso, waxaanu rabnaa inaad ku raaxaysato boggayaga internetka. Waa wax aan fiicneyn oo sidaas ah, waxa aad si aad ah u dhib badan tahay. Waxaad u baahan tahay sidaan oo kale oo sidaan oo kale ah oo aan ku siino. Maalin kasta, toddobaadkii iyo isbuucii, sanadka oo dhan. Waxaad ka heleysaa casriyeyn bilaash ah, tan oo ah porno daran, mar labaad, bilaash ah. Fadlan ha ka helin wax ku saabsan: Waxaan dooneynaa inaan maqalno jawaabtaada, waxaan rabnaa inaad noo sheegto fiidiyowyada aad ku raaxaysatid, cadaabta, waxaad xitaa noo sheegi kartaa sida maalintaada u socotay - ma naqaano, waan kuu qabanaa, waxay doonayaan inay dib kuu dhagaystaan.
Blog-ka Fetish-ka ah > About